Ngwongwo nchara mejupụtara
Tinye nchara nchara
Ngwongwo nchara pụrụiche
Igwe anaghị agba nchara grating
Ngwongwo ígwè welded
Ọnụ ego FRP
Ụlọ osisi acrylic
Kedu ụzọ isi wụnye grating ígwè
N'ozuzu, e nwere ụzọ abụọ maka ịwụnye grating ígwè: ịgbado ọkụ, na nwụnye mkpachị. Yabụ, kedu uru na ọghọm dị n'ịwụnye grating ígwè? Ka anyị lee anya n'okpuru. Welding bụ usoro a na-ejikarị wụnye na idozi. N'ozuzu, isi ihe anọ dị gburugburu st ...
Uru nke FRP grating nke ụlọ ịsa ụgbọ ala
Njirimara nke grating FRP nke ịsacha ụgbọ ala. Ngwongwo FRP nke ime ụlọ ịsa ụgbọ ala anaghị amị amị na nrụgide. FRP grating bụ ụdị grille, nke nwere ike ịwụ mmiri ma na-eguzogide corrosion. FRP grating nwere agba dị iche iche, ma enwere ọtụtụ ụdị dị. Ndị FRP na-akwado ...
Ị nwere ike ikpughe ígwè galvanized grating na anyanwụ?
Enwere ike ịgbanye grating ígwè galvanized n'anyanwụ? Hot-mikpu galvanized ígwè grating ogwe ugbu a ọtụtụ ebe, nke fundamentally solves nsogbu nke corrosion na mmebi nke omenala metal ihe na osisi plastic ngwaahịa. The na-ekpo ọkụ-mikpu galvanized ígwè grating kwesịrị ikpughe na t ...
Ojiji e ji steepụ steepụ nchara nchara pụtapụtara
A na-eji steepụ steepụ eme ihe na ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, yana injinia ime obodo, injinia ịdị ọcha na mpaghara ndị ọzọ, ụzọ ije, ụlọ ihe nkiri, ọwa nlele, ebe a na-adọba ụgbọala na nnukwu ebe ndị ọzọ dị n'ala. Nzọ ụkwụ steepụ bụ ngwaahịa ejiri stee mee nke ọma.
Njirimara na ngwa nke ntinye grating ígwè
Ngwongwo nchara bụ ịpịa nchara gbagọrọ agbagọ dị ka ebe dị anya n'ime nchara dị larịị nke ike dị n'akụkụ, iji nweta efere grid nwere nkwonkwo ịgbado ọkụ siri ike, ụdị efere dị ka na elu akụkụ anọ. Nchara dị larịị na-anata ibu, yana crossbar (ntụgharị ntụgharị ihu ...
Ihe gbasara iwebata oru ngo na-ekpo ọkụ galvanized ígwè grating
Hot-mikpu galvanized ígwè grating bụ okporo ihe ekara ụlọ ihe eji obere carbon ígwè ewepụghị ígwè na gbagọrọ agbagọ square ígwè welded horizontally na vetikal. Hot-mikpu galvanized ígwè grating nwere ike mmetụta nguzogide, ike corrosion iguzogide na arọ ibu ikike, mara na mma ...
Ọrụ nke fiberglass grating na ịchọ mma okporo ụzọ
site admin na 21-07-05
Ụfọdụ obodo echebarala ọnọdụ a dị n'elu echiche, na ihe ha na-eme bụ iji ciment mechie mgbọrọgwụ osisi ahụ kpamkpam. Nke a adịghị mma. Nke a adịghị mma maka ito eto, n'ihi na osisi ndị dị n'akụkụ abụọ nke okporo ụzọ obodo abụghị osisi nkịtị. The vitality bụ rel ...
Uru nke ígwè grating
A na-ejizi nwayọọ nwayọọ na-abanye n'ụba ígwè n'ime ndụ anyị kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, a na-etinye grating ígwè n'ụlọ ahịa ịsa ụgbọ ala n'obodo dị iche iche. Ị ghọtara uru ọ bara? Ka anyị lee ya anya. 1.Beautiful ọdịdị, inogide. Hot-mikpu galvanized elu ọgwụgwọ na-eme ka ọ na-egbochi corrosive, ihe ...
Ngwa sara mbara nke ígwè grating
A na-ejikarị grating ígwè eme ihe na petrochemical, ọkụ eletrik, mmiri mgbata, ọgwụgwọ nsị, ọdụ ụgbọ mmiri na wharf, ihe ịchọ mma ụlọ, ụlọ ụgbọ mmiri, ebe a na-adọba ụgbọala nke onwe ya, nkà na ụzụ obodo, injinia ọcha na mpaghara ndị ọzọ. Ọwa, ụzọ ije, àkwà mmiri trestle, mkpuchi trenchi, oghere oghere...
Ngwa nke Gabion Net na Road and Bridge Construction Project
A na-ejikarị Gabion net mee ihe dị ka usoro ihe ọhụrụ na njem njem, nchekwa mmiri, nchịkwa obodo, ọrụ ubi, mmiri na nchekwa ala na ọrụ injinia ndị ọzọ. The mgbochi corrosion, eyi na-eguzogide na elu-ike ala-carbon elu-galvanized ígwè waya ma ọ bụ 5% -10% aluminom ...
Ngwa nke FRP grating na ọrụ ọgwụgwọ nsị
Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ, a na-eji nwayọọ nwayọọ na-eleba anya na ihe ndị metụtara nchebe gburugburu ebe obibi, ọgwụgwọ nsị bụ otu n'ime ụzọ dị mkpa nke nchebe gburugburu ebe obibi. Dị ka ụdị ọhụrụ nke dị arọ, ike dị elu, na ihe na-eguzogide corrosion, FRP pultruded profile bụ. echiche...
Ngwa mkpuchi mkpuchi mmiri n'okporo ụzọ dị n'okpuru ala nke Coal Mine
N'ime usoro mmepụta nke coal, a ga-emepụta nnukwu mmiri dị n'ime ala. Mmiri dị n'ime ala na-abanye na sump site na olulu edobere n'otu akụkụ nke okporo ụzọ ahụ, mgbe ahụ, a na-agbapụta ya n'ala site na mgbapụta ọtụtụ ọkwa. N'ihi oghere dị n'okporo ụzọ dị n'okpuru ala, efere mkpuchi m ...
Ma ị bụ onye mbido chọrọ ụlọ ọrụ nka ọhụrụ zuru oke ma ọ bụ naanị otu ngwa ịme ihe… ABE
Uru nke FRP grating nke ...
Ị nwere ike ikpughe galvanized ígwè grating t ...
Njirimara na ngwa nke s...
adreesị: 50 mita n'ebe ndịda nke njikọ nke Weier Road na Jingliu Road, Anping County, Hengshui City, Hebei Province.
Mkpado na-ekpo ọkụ, Ngwaahịa na-ekpo ọkụ, map saịtị
Ihe mgbochi mkpọtụ, Tinye nchara nchara, Mpempe mmanya dị nro, Anti Skid Grating, Mgbochi-slip grating, Aluminom grating serrated,